5 su'aalood oo si fiican kuu fahamsiin doona qarxinta fulkaanaha Calbuco | Saadaasha Shabakadda
Toddobaadkii la soo dhaafay waxaa jiray mid ka mid ah wararkii ugu badnaa ee bixin doona inta lagu jiro sannadkan 2015, qarxinta lama filaanka ah ee Cabulco volcano Koonfurta Chile. Kadib markaad aragto muuqaalada cajiibka ah iyo kuwa naxdinta leh ee fulkaanaha ficil ahaan, hubaal waad sameyn doontaa Su'aalo badan. Marka xigta waxaan isku dayi doonaa inaan ku siiyo jawaabaha su'aalaha noocaas ah iyo runtii sifiican u fahma waxkasta oo laxiriira fulkaanaanta Cabulco.
1 Muxuu qaraxu u ahaa mid kedis ah?
2 Intee in le'eg ayuu finanku socon karaa?
3 Maxaa ku jira fulkaanaha Cabulco?
4 Maxaa dhacaya haddii roob da’o?
5 Fulkaanaha Osorno miyuu qarxi karaa?
Muxuu qaraxu u ahaa mid kedis ah?
Sida laga soo xigtay khubarada badankood, 95% qaraxyada badanaa waxaa horay loogu sii ogaadaa dhawaq, ur ama qaraxyo yar yar awgood. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira 5% kiisaska aan haba yaraatee wax digniin ah lahayn. Tani waa waxa ku dhacay kan Fulkaano Calbuco.
Intee in le'eg ayuu finanku socon karaa?
Nooca Fulkaanaha, da 'ahaan iyo baaxaddiisa, qarxitaanka oo bilaabmay Arbacadii la soo dhaafay waa la sii dheereyn karaa dhawr maalmood oo kale iyo xitaa dhowr toddobaad.
Maxaa ku jira fulkaanaha Cabulco?
Fulkaanahaan ayaa leh xaddi badan oo silica ah, tani waxay u keentaa in uurku uu noqdo mid aad uga waxqabad badan kan caadiga ah iyo inuu aad u horumaro Tan waxaa usii dheer, waxay leedahay biyo aad u badan sidaa darteed qaraxu waa wax qarxa.
Maxaa dhacaya haddii roob da’o?
Hadduu roob da'o maalmahan, xaaladdu way sii adkaan lahayd maxaa yeelay wicitaanka ayaa dhici kara roob acid. Intaas waxaa sii dheer, waxaa jiri doonta suurtagalnimo sare oo fatahaad ah aagga oo dhan.
Fulkaanaha Osorno miyuu qarxi karaa?
Sida laga soo xigtay fikradaha khubarada berrinka, waa wax aan macquul aheyn maadaama ay yihiin fulkaano kala duwan oo aysan isku xirnayn. Maalmo gudahood hawshu way yaraan doontaa xooggeeda khatarta ugu weyni way ka imaan kartaa alluvium.
Waxaan rajeynayaa inaan ku xaliyay shaki kasta oo ku saabsan qaraxa naxdinta leh ee foolkaanada Chile ee Cabulco.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » 5 su'aalood oo si fiican kuu fahamsiin doona qarxinta fulkaanaha Calbuco
Isbedelka cimiladu wuxuu saameeyaa haweenka uurka leh